Moyen-Orient : Momba sy manohitra ny fandaharana amin’ny fahitalavitra mandritry ny Ramadany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2008 12:14 GMT
Vao manomboka ny volan'ny Ramadany izao ary ireo mpijery fahitalavitra miteny arabo dia samy efa tsindrian-daona miandry izay fandaharana haroson'ny fahitalavitra voaomana ho amin'izany ny hariva. Ireo mpitoraka blaogy jordaniana, saodiana sy ny avy any Barheïn dia mifanpizara ny fomba fijeriny manodidina ireo fandaharana be mpanaraka mandritry ny Ramadany.
Avy any Barheïn, zendana i Sami [amin'ny teny Arabo] mahita ny ezaka ataon'ireo mpiray tanindrazana aminy mba tsy ho tara ny fandaharana ao amin'ny fahitalavitra – ary manontany tena raha mbola misy olona liana sy manokana fotoana amin'ny tetiandron'ny fiventesana (toriteny) ny Ramadany :
Betsaka ny mail voaraiko mitondra fanamarihana mikasika ireny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra ireny sy ny fandaharana mandritry ny Ramadany, toy ireo avy any Egypta, Siria sy ireo firenena avy any amin'ny Golfe, saingy tsy misy mba ho an'ireo mpanaraka ny <a href=”>Muhannad sy Noor . Mazava ho azy fa be ny olona no nandamina ny fotoany sy ny asa aman-draharahany hifanaraka amin'ny Ramadany, mba hahazoany antoka fa tsy ho tara ireo fandaharana mahaliana ao amin'ny fahitalavitra ry zareo. Ny hafa dia nanao fandaharam-potoana, misy isafidianana raha sanatria misy fandaharana samihafa mifanindry amin'ny ora mitovy, mba hahafahana manaraka izay mety ho famerenana.
Inoako fa amin'ireo lenta avo nentin'ny teknolojia vaovao dia ny DVD misy Disque Dur azon'ny mpampiasa handraisana izay fandaharana tiany no tena tombony azo. Azon'ny olona atao rahateo ny manomana ilay fitaovana mba handray izany mandritry ny fotoana tsy maha ao an-trano azy.
Tsy fantatro hoe firy amintsika no nanangana fandaharam-potoana hihainoana ny fiventesana ny Ramadany, sy hoe aiza no anatanterahana azy, inona no lohahevitra ho banjinina. Tsy fantatro koa hoe firy no efa namaritra mialoha ny ora hamakiana ny
Du'a [vavaka fifonana]. Tena tsy haiko marina e!
Manome torohevitra i Bakkouz , avy any Jordania:
Zavatra iray tsy azo iadian-kevitra, mandefa fandaharana tsara be ny fahitalavitra rehefa fotoan'ny Ramadany, izay mahatonga ny olon-drehetra ho adala'ny fahitalavitra sy ireo fandaharana ankafiziny manokana, toy ny fanarahana antokom-pivavahana mihitsy. Izaho manokana, ohatra, dia tsy hisalasalana fa hanaraka ny Bab El-Hara [tantara Siriana] satria tsy dia ankafiziko loatra ireny fandaharana miresaka tantara sy momba ny Bedouins ireny (na dia tsy manana kina amin'ireny fandaharana miresaka tantara sy momba ny Bedouins ireny aza aho, ianianako). Azonareo jerena izay tianareo harahana saingy NOHO NY FITIAVAN'NY TOMPO AZA MIJERY IRENY FANALA HAMOHAMO SY FANDAHARAN-DALAO JORDANIANA IRENY, indrindra fa ireo mandeha avy hatrany aorian'ny “athan” [fiantsoana hivavaka], raha tsy izany, mety ho tratry ny aretin'ny ati-doha ianareo. Matotra 100% aho amin'izany , aza manao an'izany!
Na izany aza, tsy ny mpitoraka blaogy rehetra akory no miandry fatratra ireny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra ireny – na ny Ramadany amin'ny maha-Ramadany azy. Ao Bahreïn, tsy mahatanty intsony i The Girl With No Face [amin'ny teny anglisy]:
Ramadany Ramadany Ramadany Ramadany.. Halako ny Ramadany… Ary rehefa teneniko amin'ny feo avo eny imasom-bahoaka, dia hoy ny olona mamaly: “astaghfer Allah” [ Allah anie hamela ny helony] sahala amin'ny hoe niteny ratsy ny fivavahany aho. Halako ny fihatsaram-bela-tsihin'ny Ramadany. Halako ny familivilian'ny olona ny tena hevitry ny Ramadany. Halako ny tsy fananan-tsafidy. Halako fa izay olona rehetra miresaka momba ny Ramadany dia ny fandaharana momba ny Ramadany amin'ny fahitalavitra daholo.
Hoy i Bassem Kurdi manoratra avy any Arabia Saodita :
Fenofeno kokoa noho ny tamin'ny taona lasa lisitry ny fandaharana manokan'ny fahitalavitra mandritry ny Ramadany tamin'ity taona ity. Nefa Tash Ma Tash, ilay tantara mitohy Saodiana be mpanaraka, dia tsy isan'izay handeha amin'ity taona ity. Najanon-dry zareo tamin'ny farany ilay izy, rehefa nahita fahombiazana nandritry ny fihodinana efa ho in-dimiambinifolo. Tsy dia isan'ireo matimaty amin'io tantara mitohy io aho nefa kosa ekeko fa tena mamboraka ireo olana goavana zakaintsika eto amin'ny firenentsika izy io … Hevitro manokana, tsy dia manaraka loatra ny fahitalavitra aho amin'ny fotoan'ny Rmadany satria heveriko fa misy zavatra hafa manan-danja kokoa noho izay tokony hatao mandritra io fotoana io noho ny hiraikitra eo anoloan'ny fàfan'ny fahitalavitra.
Mpitoraka blaogy saodiana iray hafa, deja vu [amin'ny teny arabo], dia nanao fampielezan-kevitra ho fibodoana ny fahitalavitra mandritry ny Ramadany, mba tsy ho takona ny tena hevitr'ity volana ity :
Fa inona ity fampielazan-kevitra ity>
Manely fitondran-tena sy fihevitra tailana ireo fitaovan-tserasera mandritry ny Ramadany ary manararaotra io vanim-potoana io ho fampidiram-bola noho ny fahamaroan'ireo mpijery mampifantoka ny sainy amin'ny fahitalavitra. Tonga amin'ny fara-tampony ny tondro-zotran'ny fanarahana satria efa voataiza ny mpijery fahitalavitra hisaina ny volan'ny Ramadany ho toy ny iray volan'ny fahitalavitra isan-taona. Ny Ramadany fotsiny amin'izao koa dia manome “tolotra mampilendalenda” : ny fifadian-kanin'ny vatana, ny saina, ny fitondran-tena sy ny fomba amam-pihetsika.